Mba ndị America nwere ike ịga ezumike n'oge ezumike COVID-19
Home » Na-agbasa News Travel » Mba ndị America nwere ike ịga ezumike n'oge ezumike COVID-19
Na 3,844,271 America na-arịa ọrịa na Coronavirus mgbe 47,5 nde nọ na-anwale nke ngụkọta bi na 331 Nde. Nọmba a na-achọpụtabeghị nke ndị ọrịa COVID-19 nwere ike ịbawanye elu na United States. Ihe karịrị ọnwa 5 n'ọrịa ahụ 1,915,175 ndị ​​America ka na-ahụta dị ka ndị na-arụ ọrụ. Ndị America 142,877 nwụrụ. Nke a na ihe dịka ụgbọelu 650 juputara na mbara igwe.
Ọnọdụ ahụ dị ka nke enweghị njikwa, ọkachasị na Florida, Texas, Arizona, na California n'oge a.
Travellọ ọrụ njem na njem bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị njọ na ndị America na-achọsi ike ịmalite njem ọzọ. Ere ụwa emechibidoro ụmụ amaala US. Ọbụna European Union na UK anaghị ahapụ ndị America maka ezumike.
Agbanyeghị, enwere mba ndị ọzọ na-achọsi ike maka njem nleta nke meghere ókèala ha ọzọ. Offọdụ n'ime mba ndị a mepụtara usoro ọkaibe nke ukwuu iji jide n'aka na o yighị ka nje ahụ ọ̀ ga-amalite ebe ahụ. Jamaica guzobere paseeji njem njem pụrụ iche, Bahamas chọrọ ule. Enweghị iwu pụrụ iche edobere maka Tanzania. Enwere ọtụtụ iwu dị iche iche maka mba dị iche iche.
Nke a bụ ndepụta nke mba na ókèala mba ọzọ na-anabata ndị ọbịa America n'oge a:
Albania - July 1
Antigua na Barbuda - June 4
Aruba - July 10
Bahamas - July 1
Barbados - Julaị 12
Bali (Indonesia) Septemba 1
Bermuda - July 1
Croatia - July 1
Dominican Republic - Julaị 1
Dubai (UAE) - Julaị 7
French Polynesia - Julaị 15
Grenada - August 1
Jamaica - June 15
Maldives - Julaị 15
Malta - July 11 (na-echere ihu ọma)
Mexico - June 8
North Macedonia - July 1
Rwanda - June 17
Serbia - Mee 22
Sri Lanka - August 15
St. Barths - June 22
St. Lucia - June 4
St. Vincent na Grenadines - Julaị 1
Tanzania - June 1
Turkey - June 12
Ndị Turks na Caicos - July 22
Vaccine adọ 3 na-anwale ule na UAE na Russia na-ekwe nkwa
Ndị ọrụ njem India na-enweghị akwụkwọ iji dee akwụkwọ ụgbọ elu Vande Bharat